Ịkwanyere & WPC mgbidi ogwe
Ịkwanyere marble mpempe akwụkwọ
WPC mgbidi panel
WPC osisi tube
Ịkwanyere ụfụfụ board
Film Kpa Plywood
Melamine Kpa Board
Tumadi mmepụta-ekpuchi iche iche iche iche nke mma ihe, na-ewu ihe, ụdị nile nke plywood, melamine ihu plywood na na
IHE ỌZỌ Ị
Ọ bụla zuru ezu e n'obi!
Kwa craft zuru okè!
Iketa ịchụso mma na mkpụrụ obi nke ndị enterprise, Ka ụwa dị iche iche n'ihi na nke Dalu Wood.
achụ nke àgwà kacha mma
N'ihi na ihe karịrị afọ 15, Shandong Golden Continent Ịchọ Mma Materials Co., Ltd bụ ọkachamara emeputa na ahia, pụrụ iche na-nnyocha, mmepe na mmepụta. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike anụ ogologo oge nkwado mmekọrịta ọtụtụ mba ọzọ ndị ahịa. Anyị na-dị na Shandong na-adaba adaba njem ohere.
Main ngwaahịa ekpuchi iche iche iche iche nke ịkwanyere ogwe na WPC ogwe, gụnyere: ịkwanyere marble mpempe akwụkwọ, ịkwanyere mgbidi panel, WPC panel na ịkwanyere ụfụfụ osisi, wdg Anyị ụlọ ọrụ a raara nye ji achọ mgbidi ogwe na elu àgwà. Consumer afọ ojuju bụ anyị kacha mkpali maka anyị aga n'ihu mma!
Anyị na-mgbe na-agbaso azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "na-eme ka ụwa n'anya Chinese ngwaahịa" na-atụ anya na-akpụ ọma ahịa mmekọrịta ọhụrụ ahịa gburugburu ụwa nkịtị development n'ọdịnihu dị nso.
Eme ka ụwa n'anya Chinese ngwaahịa
Ime ụlọ ịkwanyere WPC Great Wall Panel
1.Specifications Dị Colo ...
ji achọ profaịlụ Ogologo Great Wall panel wpc b ...
Ihe onwunwe plastic na osisi Technolog ...
Eco-Wood WPC N'uko
Ihe osisi, ịkwanyere, nwekwara Technol ...
Ihe osisi na plastic mejupụtara ...
Ịkwanyere Film ihu ịkwanyere ụfụfụ osisi / mpempe akwụkwọ n'ihi na mgbidi d ...
1.Specifications: ịkwanyere ụfụfụ Board Na ...
Solid ịkwanyere Forex mpempe akwụkwọ 1,22 * 2.44m ọcha celuka p ...
1. nkọwa: ịkwanyere ụfụfụ Board ...
Ịkwanyere marble mpempe akwụkwọ mgbidi mma ogwe
1. Structure na nkọwa: Nam ...
N'ihi na ihe karịrị afọ 15, Shandong Golden Continent Int'l Trade Co., Ltd bụ ọkachamara emeputa na ahia, pụrụ iche na-nnyocha, mmepe na mmepụta. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike anụ ogologo oge nkwado mmekọrịta ọtụtụ mba ọzọ ahịa ...
Shandong Golden Continent Int'l Trade Co., Ltd. @ 2019 Edebere ikikere nile
Linyi obodo, Shandong Province, China
Best Price Commercial Plywood, Ịkwanyere Ji achọ mpempe akwụkwọ, Film Kpa Shuttering Plywood, Plywood Exporter, Ịkwanyere Wall Panel, Composite Plywood,